Dhata reIreland rinogona kunge risingavakwe | Ndinobva mac
Dhata reIreland rinogona kunge risingavakwe
Sezvo Apple yakazivisa makore maviri apfuura, kuvakwa kwenzvimbo yedata muIreland, makiyi mazhinji akamanikidzwa kuzivisa nezve akasiyana matambudziko akatarisana neApple kuivaka. Mwedzi mishoma yapfuura, mushure mehondo dzakasiyana neAthenny County, uko Apple inoronga kuvaka iyi data centre, yakazopedzisira yaenda mberi kwayaida, saka inogona kutanga kuvaka pese painoda.
Asi zvinoita sekunge ikangokwanisa kuwana kuenda-mberi, ikozvino iri Apple pachayo isinganzwisisike kana ichizopedzisira yavaka iyi dhata nzvimbo muIreland, ku tora mukana wemamiriro ekunze emunyika, sezvo ichizopihwa simba rinowedzerwazve, kana chirongwa chayo chichiendeswa kune imwe nyika, senge kuDenmark, uko kambani iine data centre iri kushanda uye kwayakatowana mukana wekutanga kuvaka imwe.
Mubvunzurudzo yakapihwa Tim Cook kune wepakati RTE, Cook anoti parizvino havazive kuti kuvaka nzvimbo yedata muIreland kunotanga riini, vachisimbisa izvozvo hurumende yenyika yaizoita chero chinhu musimba rayo kutanga chirongwa ichi, iyo sezvandambotaura pamusoro, parizvino yakaremara zvachose.
Ireland yakavaka hupfumi hwayo pakukwezva nyika dzekunzeMuchokwadi, rimwe chete mumabasa gumi rinobva kumakambani ekunze uye nzvimbo dzemadhata ndeimwe yemari yakakosheswa iyo chero nyika dzepasi rose dzingaite munyika, sezvo ichipa basa kwete chete panguva yekuvakwa kwayo asiwo panguva iyo iri kushanda.
Hatizive kana iyo faindi iyo European Union yakamisikidza kuIreland ye13.000 mamirioni euros, yekusatorera mitero inoenderana neApple mumakore achangopfuura, inogona ndicho chimwe chezvikonzero nekuda kweiyo Apple iri kuramba ichitaura nehurumende yeIrish, kunyangwe ichiratidza rutsigiro rayo rwese rweCompertino-based kambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Dhata reIreland rinogona kunge risingavakwe
Inofungidzirwa kuti Apple yakatengesa anopfuura mamirioni e3,9 Apple Watch muQ3
Izvi ndozvinoita mabumpers anotaridzika seako Apple Watch